China Fan bhegi rekumashure vagadziri uye vatengesi Chapman
✭ Chakafukidza chivharo chepurasitiki chemufeni uyu chakagadzirwa nePA66 + 30GF epurasitiki zvinhu. Ichi chinhu chepurasitiki chinoshingirira kuora uye kuchembera, uye chakakodzera kushandiswa mumamiriro ekunze akasiyana siyana.
✭ Iyi seti yeforoma epurasitiki inoendeswa kunze kwenyika dzeEurope, uye hupenyu hweforoma hunoda kusvika mazana mazana mashanu emazana. Iyo fekitori yekushandisa inoshandisa 1.2343 yakaoma zvinhu, uye iyo mold spark spark inoshandisa graphite mhangura. Chimiro cheforoma chinoitwa ne-matatu-ndiro chakuvhuvhu, uye iyo jekiseni kutenderera i32 masekondi. Aya akateedzana eparameter ese ari mukutarisa kwevatengi mutengo weforoma dhizaini uye kugadzira, kuti vakunde yakawanda yekugadzira purofiti sezvinobvira kune vatengi.
Muforoma NO. CPM-150226
Pamusoro Pedza Maitiro VDI-33
Zvinyorwa zvePurasitiki PA66 + 30GF
Chikamu uremu 30.5g
Chikamu chemazana 190 * 190 * 63 mm
Saizi yekukura 400 * 400 * 411mm
Chikamu Zita Fan rekumashure kavha
Mumhanyi Nhatu ndiro muforoma kune poindi gedhi
Standard Kopa Meusburger
Mould Material 1.2343ESU / 1.2312
Lead Nguva Mazuva makumi matatu
Muforoma Kutenderera Nguva: 32's
MaFans maindasitiri anoshandiswawo mune akasiyana mafomu senge chemakemikari, zvekurapa, zvemotokari, zvekurima, zvekumigodhi, zvekugadzira chikafu, uye maindasitiri ekuvaka, ayo anogona kushandisa ega ega vateveri vemaindasitiri munzira yavo. Ivo anonyanya kushandiswa mune akawanda kutonhora nekuomesa kunyorera.
Centrifugal blowers anogara achishandiswa kumisikidza senge kudzora guruva, kupisa mweya, pakutonhorera, kuomesa masystem, emvura yemubhedha yemvura ine mweya inotakura masystem etc. Yakanaka yekumhanyisa vafuridzi inowanzo shandiswa mukubuditsa mweya, uye kune sewage aeration, kusefa firita, uye kuwedzera gasi, pamwe nekufambisa magasi emarudzi ese muma petrochemical maindasitiri.
Naizvozvo, compressors, mafeni, uye vafuridzi, zvinonyanya kufukidza Municipal, Kugadzira, Oiri & Gasi, Mining, Zvekurima Indasitiri kune avo akasiyana mafomu, akareruka kana akaomarara muchimiro.
Kuongorora kwakadzama kweese magadzirirwo uye maratidziro anodikanwa kuti utenge yakakodzera compressor, fan kana blower iyo inowanikwa mumusika kuitira kuti igone kuenderana nezvinodiwa nemaitiro ako uye kuve nechokwadi chekuvimbika nekusimba panguva imwe chete.
Pashure: 34 uye 4 pini yekubatanidza
Zvadaro: Kofi muchina zvikamu